Shiinaha Company News Factory - Company Cheap News-qeybiye, dhoofisaa
waqti Post: 02-01-2018
waqti Post: 01-10-2018
waqti Post: 12-27-2017
waqti Post: 12-11-2017
waqti Post: 11-29-2017
waqti Post: 10-12-2017
waqti Post: 09-12-2017
waqti Post: 08-29-2017
waqti Post: 08-15-2017
Koowheel 8.5inch Off-Road K7 keenaya waayo-aragnimo fiican in aad
waqti Post: 08-01-2017
The 8.5inch KOOWHEEL Smart K7 mooto dheelitirka waa mid ka mid ah hoverboard cusub ee suuqa. Waxaa qoreysa technology wax yar ka duwan yahay ka hoverboards kale, u ogolaanin in ay u isticmaalaan matoorrada oo awood badan, giringirihii 8.5inch waa fantastic on wasakh iyo cawska, inkastoo, aan la buufin isagoo, aad ...Read more »
Koowheel K8-aad dooratay Hoverboard
waqti Post: 07-21-2017
Sidee baad ku qaataan aad firaaqada Time?
waqti Post: 07-18-2017
Sidee baad ku qaataan aad Weekend Time ama LeisureTime? Sanadihii la soo dhaafay, dadka dhalinyarada ah si ay u fashion raacdada iyo hab nololeed xiiso leh, fuushan mooto dheelitirka smart waa ka sii noqday caan ah oo maanta. Waxa uu noqday jidka ugu fudud ee dhaqdhaqaaqa. Tan waxaa oo dhan u sabab ah raaxada iyo reliabil ...Read more »
Sida loo isticmaalo Koowheel is KM4 guddiga miisaamid
waqti Post: 07-12-2017
.. "A: Daar guddiga, riix" "awood on / off" "button, guddiga waa markii codkii maqlaya soo wajihi jirtay iyo LED iftiin tilmaame on yahay 2. Talaabada on board iyo sii dheelitirka Marka hore gelin hal lug on suufka cagta ka dibna si tartiib ah u guurto diiradda jidhka ee suuf cagta, iyo th ...Read more »
rullebrett korontada la qaadi karo inta badan dunida ee
waqti Post: 06-22-2017
In Europe iyo Mareykanka iyo dalalka kale, mootooyinka hoverboard ama mooto skeidgareeyo waa mid aad loo jecel yahay, kids bilaabi ciyaaro mooto skeidgareeyo da'da hore. Shirkadda technology Koowheel soo bandhigay taariikhda Afar wheel skeidgareeyo ku Electric la dual motor, loo isticmaalo gaaban ...Read more »
feauture laba wheel k3 mooto smart ah
waqti Post: 06-13-2017
Laba Wheel Electric mooto waa korontada, awoodda is-dheelli ah shakhsiyaadka si ay u isticmaalaan baabuurta gaadiidka, la gaari magaalooyinka, waa la gaari cusub oo aan horay loo arag. Sidoo kale loo yaqaan guddiga dulsaar ah, gaadiid shakhsiyeed, shaqo ilaalinta, garoonka gudaha, gaadhigii golf, ilaalinta booliska, exhibitio ilaalinta ...Read more »
Mooto K5 kooban The Self-dheelli
waqti Post: 05-27-2017
Product Description mooto is-dheelli waxay leedahay saddex qaybood. Labada faasas xakameeyo dhinac bidix iyo midig ee jidhka mooto ee; labada dhinac shaqeyn karaan si madax banaan halka dhaqaaqin, oo ma faragelin doonto midba midka kale. mooto waxay leedahay laba giraangiraha; width ku kala dhex martaa giraangiraha ma ...Read more »
KOOWHEEL New design mooto Electric L8
waqti Post: 05-08-2017
Macay Koowheel design moodada mooto korontada Cusub oo L8 Si kabaha lugaha waa in ay lacag la'aan ah, ma jiraan xeerar Adduun iyo aad kaliya cidhiidhiyey aad male gaar ah. Koowheel qaadan kartaa inaad meel kasta oo aad doonaysaan, waxaa jira xad lahayn. Waxaan qabaa brand waa in gudashada fikrad this, halkan ka ...Read more »
waqti Post: 04-28-2017
Koowheel New miisaamid smart intrduction K5 mooto
waqti Post: 04-12-2017
Koowheel New is korontada mooto miisaamid K5 waxaa soo socda! Waxay leedahay kala duwan badan oo joogto ah laba wheel mooto smart. About hoverboard this, our R & D Kooxda waqti badan ku fuushan waayo-aragnimo ku qaataan, si horumar looga samayn lahaa dadka wanaagsan ku raaxaysan barakaysan saaran gaadiid. Saddex qaybo dhismayaasha. Kee ...Read more »
Sida loo Raaco Koowheel Electric skeidgareeyo?
waqti Post: 03-29-2017
baabuur Balance ku siinayaa habka ugu raaxo leh inuu u safro ee xagaaga
waqti Post: 03-16-2017
baabuur Balance ku siinayaa tip core hab safarka xagaaga ugu raaxo: heerkulka sare loo dulqaadan karin in xagaaga kulul, safarka noqdo cadaab. baabuur dheelitirka Koowheel ku siin habka ugu raaxo leh inuu u safro ee xagaaga, xagaaga qabow! Summer, safarka uu noqday nooc ka mid ah dhibaatada, maalin qoraxdu, t ...Read more »
La kulan aad u baahan-Koowheel saaran Balance mooto oo dhan
waqti Post: 03-14-2017
Ma la mid ah sida Koowheel dheelli mooto ah, sahlan on fardaha, safar kortaan ka xiiso badan, aad rabto in aad bilowdo? Ma doonaysaa in ay la kulmaan fuushan farxo magaalada? Just ku siin baabuur dheelitirka KOOWHEEL, aad si xor ah u mari karin wado wakhti dheer oo aan ka werwerayn oo ku saabsan str sare ...Read more »
KOOWHEEL E-skeidgareeyo, dhig noloshaada noqon Cool
waqti Post: 03-01-2017
Ma waxaad ka heshay qalab lagama maarmaanka ah ee dalxiiska-Balance mooto?
waqti Post: 02-22-2017
Laba taayir dheelli gaariga si aad u qaadato in ay kulan guga Haddii jiilaalka waa la waayayaa, bixi karaan fogaan? In guga waxaan doonayaa inaan sii joogo iska kulan il. ubax Wild Bloom guga, marka ay dadku arkaan ubax midabo iyo udgoon, si dabiici ah joojin doonaa, eegno. Baadhitaanka ayaa lagu ogaaday in t ...Read more »
Koowheel Electric skeidgareeyo Start Guide Quick
waqti Post: 01-17-2017
KOOWHEEL ku siin waayo-aragnimo kala duwan oo ku saabsan E-mooto ama E-skeidgareeyo fuushaan
waqti Post: 01-09-2017
fardaha ma aha in ka badan saldanad baydalka, oo mar dambe la mooto dhaqanka iyo baaskiilka korontada this category. Sida gaadiidka shakhsi, xawaaraha uu jiro, laakiin dhibaatada wasakhda waxa uu noqday xarunta of khilaaf. KOOWHEEL laba K1 guddiga wheel iyo afar giraangirood oo HOV skeidgareeyo korontada ...Read more »
waqti Post: 01-04-2017
In la soomo casriga ah ee nolosha, waayo inta badan collar cad, nashaadyada bannaanka farxad wanaagsan isbuucaan. Halkan yimaado su'aasha ah: sida ay u heli karaan in ay meesha ku heshiisay? KOOWHEEL Electric skeidgareeyo noqon doonaa doorasho fiican, kuwa dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha moodada. Waxaa loola jeedaa in aanay aad uxoogan iyadoo ...Read more »
Ha mooto ku dheelitirka smart raaci kula at Christmas.
waqti Post: 12-08-2016
Maadaama uu sanad kasta ee Christmas ku dhawaad, Christmas yaqaan in Shiinaha Spring Festival, maanta, dadka badankiisu ma samayn karo waxa ay rabaan in ay sameeyaan iyo iibsan hadiyadahoodii ugu jecel yahay in qiimo aad u awoodi karo. Waxaad ma sugi karo in ay isku dayaan? In xawaaraha soonkii nolosha casriga ah, ugu cad-collar iyo l tago ...Read more »
Waa maxay sababta mararka qaarkood dirato fog ka maqan yahay si halka fuushan skeidgareeyo ah?
waqti Post: 11-28-2016
In xawaaraha soonkii nolosha casriga ah, ugu cad-collar rabin inaad u tagto iyo ka tago shaqeeyaan maalin walba kula niyadda a faraxsan, hoos xaaladda sii kordhaya baabuurta macaanka, iyadoo aan loo eegayn in nooca gaadiidka noqon doontaa dhib, halka socda ama fuushan a baaskiilka dhumin waqti, si aad u baahan tahay kici ah smart ...Read more »
jiidashada fashion Electric is miisaamid mooto waa Adkaadaha
waqti Post: 11-16-2016
koowheel isku dheelli mooto korontada, dadka had iyo jeer waa mid aad u cajiib ah, waayo, waxyaalaha cusub, oo sidaas daraaddeed, qalabka saaran gaadiid cusub ayaa soo jiitay dadka dareenka, jiitay tirada ugu badan ee macaamiisha tartamaya si ay u iibsadaan. Koowheel Self Dheelitirka Smart mooto haatan waxa uu noqday xiddiga saaran in ee ka ...Read more »
Waxaa jira brand badan mooto hoverboard caan ah, oo sidee baa Koowheel waxaa lagu qiimeeyay sida brand tobankii mooto smart top dhowr sano? Fadlan furo browser Google, ka dibna ka raadin keywords "qeybiyaha mooto dheelitirka" ka, ayaa lagu ogaaday in magaca domain www.koowheel.com bogga koowaad ee. In labaatan -...Read more »
Ciyaartoyda isticmaali technology cusub iyo siyaabo fikirka, si ay u bixiyaan xal cusub oo wax ku ool ah dhibaatooyinka gaadiidka casriga ah, la abuuro gaadiidka a habboonaanta, inkastoo fikrad wanaagsan yahay, laakiin aan la fulin karo, waxa markii la fulin karo weli waa su'aal. Marka dhibaato gaadiidka awoodo ...Read more »